यिनै हुन् तपाइको फोन सम्पर्क नहुँदा मा’फ गर्नुहोला भन्ने युवतीहरू : सुन्नुहोस् अहिले पनि उस्तै आवाज ! (भिडियो) – Life Nepali
काठमाडौँ। नेपाल टेलिकम एनसेल सिममा फोन व्य’स्त हुँदा , फोन सम्पर्क नहुँदा, स्विच अफ हुँदा वा कुनै का’रणले सम्पर्क नहुँदा अथवा अन्य सेवा लिन खोज्दा फोनमा महिलाको स्वर बजेको त तपाइ हामी सबैले सुन्दै आएका छौ । उनीहरूले दिने रेकर्ड गरिएका सन्देश सुनेर हामीहरू धेरै प्रयोगकर्ताहरू झर्को मानेका हुन्छन् । तर केही मानिसहरूलाई उनीहरू को हुन्, कहाँका हुन् मनमा जिज्ञासा लागी रहेको हुन्छ । ***थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,**
“तपाइले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ । केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोला । यो आवाज नेपाल टेलिकममा सुनिने यो आवाज अनुपा कर्माचार्यको हो । नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवाका लागि सन्देश रेकर्ड गराउन कलाकारको खोजी गरेको थाहा पाएपछि उनले आफ्नो स्वर रेकर्ड गरेर पठाइन्। अरू केही कलाकारसँगै उनको स्वर पनि छानियो।उनै कर्माचार्यको स्वर अहिलेसम्म पनि बजिराखेको छ।
त्यस्तै टेलिकममा बज्ने स्वरमध्ये भूमिका थापाको स्वर पनि हो। उनले रेकर्ड गराएको सन्देश अङ्ग्रेजी भाषामा बज्छ।पछि सुरु भएको अर्को निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलका लागि सुबानी मोक्तानले पनि आफ्नो स्वर दिएकी छन्। अनुपमा कर्माचार्यले केही अन्य विज्ञापनमा पनि स्वर दिएकी छन्। हाल उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग आबद्ध छिन्।भूमिका थापा पहिला रेडियो तथा टेलिभिजनमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्थिन् भने सुबानी मोक्तान गायिका हुन्। –बिबिसीबाट***थप समाचारको लागी यो भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’,
Previous हो मैले : आफुलाइ जन्म दिने बावुआमालाइ ढाँटेर तिमी सङ्ग सु’त्ने !
Next अफिस जान्छु भन्दै परपुरुषसलाई भेट्न होटलभित्र गएकी महिलाको भयो बेहाल !
2 seconds ago Life Nepali